I-ICOIL eqinile ye-zinus engu-12 inch ngamanani aphelele | Rayson
I-5 Star Hotel Mattress Queen / King usayizi 14 '' I-Spring Matress Top Bedy Bedroom Ifenisha ephezuluyenziwe ngePocket Spring, nge-5CM 3 Zone Foam, yimuphi amandla afanayo ezingxenyeni ezihlukene zomzimba. Ukunethezeka, okuhle, ukwakheka kwanamuhla. Leli phephandaba le-Hotel Spring elenzelwe ukusetshenziswa kwehhotela lezinkanyezi ezinhlanu kuphela. Ilungele impela i-High-End Star Hotel. Noma yiluphi usayizi nephethini kungenziwa ngezifiso.
Okuthile okubalulekile engikudinga ukusho:
1.Maybe kuhlukile kancane kulokho okufunayo. Eqinisweni, enye ipharamitha efana nephethini, isakhiwo, ukuphakama nosayizi kungenziwa ngezifiso.
2.Maybe udidekile ukuthi yini umatilasi wehhotela lezinkanyezi ezi-5. Yebo, ngenxa yesipiliyoni seminyaka eyi-10, sizokunikeza izeluleko zobungcweti.
Inani lakho eliyisisekelo ukukusiza ukudala inzuzo eyengeziwe.
4.Siyakujabulela ukuxoxa nawe ngolwazi lwethu, vele ukhulume nathi.
Kuyo yonke le minyaka, iRayyson ibilokhu inikeza amakhasimende imikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nezinsizakalo ezisebenzayo zokuthengisa ngenhloso yokuletha izinzuzo ezingenamkhawulo kubo. I-ICOIL eqinile ye-Zinus eyi-Intshi eyi-12 inikezele ekuthuthukiseni okuningi ekuthuthukisweni komkhiqizo kanye nokuthuthukiswa kwekhwalithi yesevisi, sesisungule idumela eliphakeme ezimakethe. Sithembisa ukuhlinzeka wonke amakhasimende emhlabeni wonke ngensizakalo esheshayo nezobuchwepheshe emboza ukuthengisa kwangaphambi kokuthengisa, ukuthengisa, nangemva kokuthengisa. Akunandaba ukuthi ukuphi noma yiliphi ibhizinisi olibandakanyekile kulo, sithanda ukukusiza ubhekane nanoma yiluphi udaba. Uma ufuna ukwazi imininingwane eminingi ngomkhiqizo wethu omusha we-ICOIL I-ICOIL CRECRECRECRIC ICOIL 12 noma inkampani yethu, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi.Ngiyakuthinta indwangu yayo, ukuphrinta. Ikhwalithi ephezulu! Ngithole izincomo eziningi. - Omunye wabathengi bethu uthi.